Private Class Teacher | George English Training Centre ﻿
1.	ကလေးများအား မိမိကိုယ်ကိုယ် အားကိုးသူများ ဖြစ်လာစေရန် နှင့် ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ သင်ယူနိုင်သူများ ဖြစ်လာစေရန် သင်ခန်းစာများ ၊ သင်နည်းများ နှင့် ထည့်သွင်းသင်ကြားမည့် အစီအစဉ်များကို စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။
2.	စာသင်ချိန် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကလေးများ သင်ယူတတ်မြောက်ရရှိသွားနိုင်မည့် သင်ခန်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် သင်ယူမှု ရလဒ်များကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ထားပြီး ထိုစာသင်ချိန်အတွင်းတွင် သင်ယူမှုပေါက်မြောက်အောင် သင်ကြားပြသနိုင်ရမည် ။
3.	ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့် ၊ အမူအကျင့်ကောင်းများ နှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာသော ကျောင်းသားများ ဖြစ်လာစေရန် ထိရောက်၍ စနစ်ကျသော အခန်းတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။
4.	သတ်မှတ်ထားသောစာသင်ချိန်များအတိုင်း သင်ခန်းစာများကို ရည်ရွယ်ချက်ပေါက် မြောက်အောင် သင်ကြားနိုင်ရန် အချိန်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
5.	သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် အခန်းတွင်းရှိ ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ တတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်သည့် မေးခွန်းများ ၊ လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်
6.	သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီ အလိုက်ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ တိုးတက်မှု နှင့် သင်ယူမှု ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းများနှင့် စနစ်တကျ ထားရှိရမည်။
7.	ကလေးများကို တီထွင်ဖန်တီးမှု ဆိုင်ရာ စဉ်းစာတွေးခေါ်ပုံ နှင့် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို ဖန်တီးပေးရမည် ။
8.	ကလေးများကို အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ဆောင်တတ်သော အရည်အချင်းများရှိလာစေရန် ပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ပေးရမည် ။
9.	အတန်းတွင်း တွင် ဖြစ်စေ ၊အတန်း ပြင်ပ တွင်ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းပြင်ပ ဘေးကင်း၍ ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော သင်ကြားသင်ယူရေး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ရမည် ။
10.	ကလေးများအား ပြုမူပြောဆိုဆက်ဆံ ရာတွင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ၊ အပြုသဘောဆောင်သော အပြုအမူ အပြောအဆို များကို ရွေးချယ် အသုံးပြုပေးရမည် ။
11.	ကလေးများအနေဖြင့် ဆရာသည် နွေးထွေးသော ၊ ပျော်ရွှင်ရသော ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူ ဖြစ်ရမည် ။
12.	ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ၏ တိုးတက်မှု ၊ လိုအပ်မှု ကိစ္စ အဝဝတို့ကို မိဘ များနှင့် ပွင့်လင်းစွာ အပြုသဘောဆောင်စွာဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ လိုအပ်သလို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရမည် ။
13.	အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို သေချာလိုက်နာနိုင်ပြီး ကျောင်းမှ ပေးအပ်သော(သို့)ဦးဆောင်သော တာဝန်များ ၊ လုပ်ငန်းများ ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ၊ ခရီးစဉ်များ ၊ ကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင် စိတ်အားတက်ကြွစွာ ပါဝင်နိုင်ရမည် ။
14.	သင်ကြား ၊ သင်ယူရေး တွင် ဖြစ်စေ ၊ ကျောင်းသားများနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင်ဖြစ်စေ ၊ မိဘများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်စေ လိုအပ်သော ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုမျိုးကို Class Teacher ,Head teacher , Supervisor, နှင့် Academic Coordinator တို့ထံမှ ရယူရမည်။
15.	ကျောင်းမှ စီစဉ်ပေးသောသင်ကြားသင်ယူရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ၊ ကျောင်းနှင့် ပတ်သတ်သော အစည်းအဝေးများ ကို စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
16.	မိမိ၏ အရည်အသွေးများကို တိုးတက်အောင် အစဉ်မပြတ် လေ့လာသင်ယူနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မိမိ၏တိုးတက်မှုများကို မှတ်တမ်းဖြင့်ဖော်ပြပေးနိုင်ရမည်။ တစ်ပတ်လျှင် စာအုပ်တစ်အုပ် ပြီးအောင်ဖတ်နိုင်ပြီး ထိုစာအုပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ မိမိတို့တွင် ရရှိသွားသော review များကိုတင်ပြပေးနိုင်ရမည်။
17.	ကျောင်းမှပေးအပ်သော သင်ကြားရေးတာဝန်များ အပြင် အခြားလိုအပ်၍ခွဲဝေ ပေးသော တာဝန်များကိုလည်း တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။
18.	မိမိ၏ သင်ကြားသင်ယူရေးဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု များ ၊ ကျောင်းသားများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံမှုများ ၊ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှု ရလဒ်များ ၊ စာသင်ခန်းတွင်း ပစ္စည်းထားသိုမှုများ ၊ စာသင်ခန်းတွင်း စည်းကမ်းသတ်မှတ်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများက ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်ဖြင့် ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံနိုင်ရမည်။
19.	မိမိ၏ သင်ကြားသင်ယူရေး ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တိုင်ပင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်ပြေပြစ်သော ဆက်ဆံရေးရှိရမည်။ အဖွဲအစည်းနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အရည်အချင်းရှိရမည်။
20.	မိမိနှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သော ဆရာ၊ဆရာမ၏ ကျောင်းတက်မှန်ကန်မှု ၊စွမ်းရည်တိုးတက်လာမှု ၊ တာဝန်ကျေပွန်မှု တို့ကို လမ်းပြပေးနိုင်ရမည်။ အလုပ်ကို မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကဲ့သို့ သဘောထား၍ မိမိတာဝန်ယူထားသော အရာများကို တာဝန်ယူ တာဝန်ခံလိုစိတ်ရှိရမည်။
•	Academic Qualifications- B.A, B.Sc,သတ်မှတ်ချက် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး Green Card ရှိသူ ဦးစားပေးမည် ။
•	Subject Qualification - Computer ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ။ ကလေးစိတ်ပညာကို နားလည်ရမည်။
•	Language Proficiency-English Language ကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင် ၊ ရေးနိုင်ရမည် ။Intermediate Level ရှိရမည် ။ English Level Test ဖြေဆိုရမည်။
Competency - • သင်ကြားသင်ယူရေး လုပ်ငန်းတွင် စိတ်အား ထက်သန်သူဖြစ်ရမည် .ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမည်။
• ထိရောက်၍ စနစ်ကျသော Lesson Plan ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
• သင်ကြားသင်ယူရေးဆိုင်ရာ သင်နည်းအမျိုးမျိုးကို တတ်မြောက်ထားပြီး ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ရမည် ။
• ကျောင်းသားများ၏ လေ့လာသင်ယူမှုများကို ထိရောက်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နည်းလမ်းများကို သိရှိပြီး အသုံးချတတ်ရမည်။
• Class Teacher , Subject Teacher မရှိသောစာသင်ချိန်များတွင် ဝင်ရောက်သင်ကြားပေးနိုင်ရမည် ။
• ကျောင်းသားများ ၊ မိဘများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်ရမည်။
Skills - • (Classroom Management), (Creativity),(Critical Thiking ) (Teaching Skills) (Technical Skills) (Problem Solving Skill)
Experience - သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ Recommendation Letter ပါသူ ဦးစားပေးမည်
Physical Demand- • သင်ယူသူများ ရှင်းလင်းနားလည်အောင် စကားပြောဆိုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
• ကူးစက်ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာ ပါရှိရမည်။
Private Class Teacher education jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobs in Yangon George English Training Centre Education, Childcare & Teaching jobs Education, Childcare & Teaching jobs Education / Training Jobs in Myanmar, jobs in Yangon